Voice of the Voiceless: With Emphasis on Oromo in Horn of Africa: #OromoRevolution;Seenaa sochii barattoota Oromoo kan bara Wayyaanee keessatti yeroo duraaf fincilli sadarkaa biyyattii fi alatti dhagahamuu danda'e kan eegale yoom irraa ti?
Posted by Hasan Ismail at 7:46 AM
Milkesa Hailu November 5, 2016 at 3:31 PM
Obbo Yaya Basher, akkuma atuu jette kanaafi bari kan qabsaawoti ABO kan nuti jechaa jirru, FDG waggaa tokkoffaa isaa miti kan inni lakkaawataa jiru. Yoo xiqqaate xiqqaate yoodhuma seenaa isa durii dhiisneyyuu erguma ABOn seeraan FDG jedhee moggaasee labsee fi Qeerroon Bilisummaas lafa jalaan ijaaramanii sochii kana jalqabanii iyyuu waggaa 11ffaa isaati kan nuti jennuf. Malee finciloota duraan turan haaluu fi bakka dhorkachuuf akka hin taane warri lafa jalaan dubbii xaxaa ooltan beekuu qabdu. Yoo Finclaaf ta,e akkuma seenaan Uummata Oromoo nu barsiisaa jirutti Oromoon guyyaa gaafa garbummaa halagaa jalatti kufee kaasee guyyaatti garboomfattootaaf tole jedhee isaaniif buleeru hin qabu. Yeroo addaa addaattii fi bakkaa bakkatti gartuudhaanii fi akka nam-tokkeetti ille taanaan finciluma gochaa har,a gahe. ABOnis fincilootuma kana keessaati kan inni dhalatee har,a saba Oromoo kaabaa fi kibbaa dhihaa fi bahaa utuu wayiin gargar hin qoqqoodiin kaayyoo Oromummaa,Bilisummaa fi Walabummaa tokkicha jedhu jalatti gurmeessee kan inni qabsaawee qabsoo saba isaa Qeerroo Bilisummaa wajjin harka walqabatee yeroo ammaa kanatti akka abidda saafaatti qabsoo finiinsaa jiruuf. Injifannoon kan Uummata Oromoo kan qabsaawota dhugaa ti. Bilisummaadhaan gumaa wareegamtoota keenyaa ni baafna.